မွမ်းမံ !! Android မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းပြproblemsနာများ Androidsis
Francisco Ruiz | | လုံခွုံရေး, Android cheat, လဲ tutorial
အလိုရှိ မျက်နှာပြင်ထပ်ပိတ်ခြင်း? Android operating system အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမကြာမီကမေးမြန်းခဲ့သည့်အထူးသဖြင့် Android Marshmallow ဗားရှင်းအသုံးပြုသူများသည် Android ခွင့်ပြုချက်များနှင့်အထူးသဖြင့် Android တွင်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းနှင့်အတူပြ.နာများ၎င်းသည် operating system ဗားရှင်းအချို့အတွက် Android တွင်တည်ရှိပြီး Android M ၏အနည်းငယ်မျှသာပြုပြင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ချိန်ညှိချက်များတွင်အထူးပြင်ဆင်ထားသည့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့်အတွက်အသုံးပြုသူများစွာမှအကြံဥာဏ်များမရရှိနိုင်ပါ။ ဒီချိန်ညှိချက်ကို Android ချိန်ညှိချက်များထဲမှာဘယ်မှာရှာရမယ်။
ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယို post ကိုဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကဘာတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုငါရှင်းပြတယ် Android M မှအပေါ်ယံလွှာကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုချက်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသော application များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူသည်။ ၎င်းသည်သူတို့အား screen overlay permissions အသုံးပြုမှုရှိနိုင်သည့် application များကိုမည်သည့်ချိန်ညှိချက်များကစီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုဖော်ပြခြင်းအပြင် အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သူတို့သည်အချို့သော Android application များတွင်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်ပြီးအတွေ့အကြုံနည်းပါးသောသုံးစွဲသူများအတွက်၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။
1 Android ပေါ်မှာ screen overlay အတိအကျဆိုတာဘာလဲ။
2 Android တွင်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းပြissuesနာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သနည်း။
3 Screen overlay ကိုပိတ်ရန်ဗီဒီယိုအဟောင်း
Android ပေါ်မှာ screen overlay အတိအကျဆိုတာဘာလဲ။
Android တွင်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းသည်အထူးခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည် applications များကို persistent ဖြစ်ရန်နှင့်အခြား application များ၏ထိပ်တွင်ဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည် ငါတို့ Android terminal မှာ run နေတယ်။ ၎င်းသည် Android M မတိုင်မီဗားရှင်းများတွင် application application ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ထင်ရှားသော document.xml တွင်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် application များသည်အလိုအလျောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုကိုဒီခွင့်ပြုချက် ALERT_SYSTEM_WINDOWSAndroid 6.0 Marshmallow ဗားရှင်းများကဲ့သို့ Android application များအသုံးပြုခွင့်ပြုချက်များကဲ့သို့သူတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအပြောင်းအလဲအချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် application ကို run လိုက်သောအခါခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုရယူရန်တောင်းဆိုခံရလိမ့်မည်။ အထက်ဖော်ပြပါ application သည်လုပ်ဆောင်သင့်သည်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒီနှင့်ဤစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ခွင့်ပြုချက်အလွန်အန္တရာယ်များသောစဉ်းစားဤအရာသည်ကဏ္ settings သစ်တစ်ခုအား Android ချိန်ညှိချက်များတွင်ထည့်သွင်းထားသည်၊ ၎င်းမှဤဖန်သားပြင်ထပ်ဆင့်ခွင့်ပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံနိုင်လိမ့်မည်။
၎င်းကိုနားလည်ရန်အတွက်ဤဖန်သားပြင်သည် Android ပေါ်တွင်ခွင့်ပြုထားသောလူကြိုက်အများဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook Messenger အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်၎င်းကိုလက်ခံရရှိသည့်မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်များအကြောင်းပြသခြင်း၏ထင်ရှားသောသင်္ကေတအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ယူသည်။ အားလုံးအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ floating အိုင်ကွန် Messenger ပူဖောင်းများ o ချတ်အကြီးအကဲများ.
ဤဖန်သားပြင်ထပ်ကိုစနစ်တကျလည်ပတ်စေရန်အသုံးချသည့်နောက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအားနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခြင်းတွင်တွေ့နိုင်သည် ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်နှင့်၎င်း၏တစ်ခုတည်းထိဘာသာပြန်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအသစ်မည်သည့်စာသားကိုမဆိုရိုးရှင်းသောရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ ကူးယူထားသောစာသား၏ချက်ချင်းပြန်ဆိုခြင်းကိုရယူရန်အတွက်၎င်းမှ floating Google Translate အိုင်ကွန်။
၎င်းခွင့်ပြုချက်ကို Android တွင်အလွန်အန္တရာယ်များသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းကို malicious applications များကကျွန်ုပ်တို့၏မူလအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိတွေ့မှုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အပြင်သတင်းအချက်အလက်များကိုခိုးယူနိုင်သောမျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည့်အသုံးချဆော့ဝဲလ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်ခိုင်းစေချင်တယ်၊ တကယ်လို့ဘယ်မှာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲသူတို့အားစာရင်းပေးသွင်းရန် တကယ့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်သောညစ်ညမ်းသော Premium SMS ၀ န်ဆောင်မှုများ.
ဒီပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစီးတွဲဗွီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းရှင်းပြပြီး Android M မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ဒီမျက်နှာပြင်ထပ်တင်မှု settings ကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြသလဲ Android M တွင်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းပါအထက်ဖော်ပြပါပြcausingနာကိုဖြစ်စေသောသက်ဆိုင်သည့် application ကိုသိရုံဖြင့်လမ်းကြောင်းသို့သွားရန်လုံလောက်လိမ့်မည် Setting / Applications / Application manager စကရင်၏ညာဘက်အပေါ်ဘက်ရှိကိုနှိပ်ပါ cogwheel အဖြစ်ပြသနိုင်သည့် menu ခလုတ်, အစက်သုံးခု၏ပုံစံသို့မဟုတ် MAS ဟူသောစကားလုံးအောက်မှာ။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ Android M မှာ screen overlay ကိုစီမံနိုင်မှာပါ မျက်နှာပြင်ထပ်ပိတ်ခြင်း ဒီဖန်သားပြင်ထပ်ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုထားသည့် application အားလုံး၏တစ်ခုချင်းစီ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုလုံးဝသို့မဟုတ်ပင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
Screen overlay ကိုပိတ်ရန်ဗီဒီယိုအဟောင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောဗွီဒီယိုဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့စွန့်ခွာပြီးသင့်တွင်များစွာသောစိတ်ရှုပ်စရာပြAndroidနာတစ်ခုဖြစ်သော Android တွင်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းအားမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုလည်းရှင်းပြထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » မျက်နှာပြင်ထပ်ပိတ်ခြင်း
222 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
သို့သော်သင် overlay ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်သင်လိုအပ်သော app icon လေးရှိပါက၎င်းသည် app list တွင်မပေါ်ပါ။ မင်းကိုခွင့်ပြုချက်ဘယ်လိုပေးရမလဲ။ ဒီကိစ္စမှာဘဏ်ကလာလို့ဒီ app ကိုငါလိုတယ် ငါ့ရဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းရှာနေတာငါရူးသွားပြီ။ သူကကျွန်တော့်ကိုစာရင်းထဲက app အနည်းငယ်သာပြသည်။ ငါ့ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Att ။ အပူတပြင်း
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ဆုံးထွက်အသစ်ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါကဤကဲ့သိုသောကိစ္စရပ်ကိုစတင်ခံစားခဲ့ရပါသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကထိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံအရာအားဖြေရှင်းရန်ကူညီနိူင်သည် .. အရာအားလုံးကိုငါကြိုးစားပြီးပြီးပါပြီ ...
ဖရန့် Ch ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဖိုရမ်၊ ငါသိသလောက်ပြoldနာရှိနေပြီဆိုတာသိပေမယ့်ကျွန်တော့် Samsung s6 (သို့) s5 မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကဒီပြseeနာရဲ့အဖြေကိုတွေ့မြင်တဲ့လူသစ်တွေအတွက် settings ကိုသွားတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောစာလုံးကို နှိပ်၍ အပြာနှင့်မီးခိုးရောင်အိုင်ကွန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုအားတစ်ခုအားလက်ဖြင့်ဖယ်ထုတ်နိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းအပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီက၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းပြင်ဆင်နိုင်သည်။
Franc Ch အားစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖရန့်ကကျွန်တော့်အတွက် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
အကယ်၍ သင်သာသန့်ရှင်းသော master (သို့) du booster ကိုသွင်းပြီးပါက၎င်း junk applications များသည် application များကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊
သငျသညျသန့်ရှင်းသောမာစတာ desistalalo ရှိပါကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
အကယ်၍ သင့်အတွက် IT မဟုတ်ခဲ့ပါကသင့်အား DANDI မှများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် SCREEN မှ SUPER POZITION ကိုဖယ်ရှားရန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ !!! 😀
Karlobell Paradas ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း။ မင်းခေါင်းပေါ်လက်သည်းကိုထိလိုက်တယ်။ ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့အတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ အခုငါဖြေလိုက်ပြီဟုတ်တယ်
Karlobell Paradas အားပြန်ကြားပါ
ရီကာဒို Taibe parraguez ဟုသူကပြောသည်
ricardo taibe parraguez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ Huawei P 8 lite ပါ၊ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် WhatsApp ကို အခြေခံ၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိသောမျက်နှာပြင်များထပ်နေခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အားခွင့်မပြုပါ။
ဟေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည်ဤ ၀ င်းဒိုးများကိုထည့်သွင်းပြီးခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်မပြုပါကသင်၏မှတ်ချက်သည်အလွန်အထောက်အကူပြုပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောမာစတာကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိသည်။ မင်းဟာ MASTER တစ်ယောက်ပါ
Daddy yanky အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ အကယ်၍ တကယ်စင်စစ်သခင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်
ငါဆဲလ်ဖုန်းကိုသတ်မှတ်သည်တိုင်အောင်, အရာအားလုံးကြိုးစားကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီးသန့်ရှင်းသောမာစတာကိုဖယ်ရှားပါဒါပေမယ့်သူက WhatsApp ခွင့်ပြုချက်ကိုအလေးအနက်မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်
Dandiiii ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါရူးသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ youtube မှာတွေ့ခဲ့သမျှဗွီဒီယိုများနှင့်ဘာမှမရှိဘူး .. မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!
ငါမှာထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်၊ ငါ watsap ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘူး၊ ငါရူးသွားတော့မယ်ဗွီဒီယိုထဲမှာသင်ပြခဲ့တဲ့အိုင်ကွန်တွေမရဘူး
Juan David ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dandi ကျိန်းသေစင်ကြယ်သောမာစတာ, ငါတို့ကစားစတိုးဆိုင်၌မှတ်ချက်များထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်
Juan DAvid ကိုပြန်ပြောပါ
ကလောဒီယာ plachicoff ဟုသူကပြောသည်
Dandy Big !!! လုပ်ပါ Desistalen မျိုးနွယ်စုများသည်သင်သန့်ရှင်းသည့်အနေဖြင့်ရှိသည်။ ဒါဟာမှော် ပြproblemနာကပြီးသွားပြီ
Claudia Plachicoff ကိုပြန်ပို့ပါ
မှတ်ချက်ပေးသောမိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Dandi နှင့်အထူးသဖြင့်သန့်ရှင်းရေးသမားများ၏ပြmentionedနာကိုဖော်ပြသောကလောဒီယာကကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် ES File Explorer ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်မဟုတ်ပါကဤပြlittleနာကြီးသော်လည်းကြီးမားသောပြsolveနာကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမဖြေရှင်းနိုင်ပါ !! ဖိုရမ်၏သူငယ်ချင်းများကိုများစွာနှုတ်ဆက်သည်။
SO DANDI, ငါသည်စင်ကြယ်သောသခင်ထံမှအိုင်တီကိုမည်သို့ဖယ်ရှားပစ်နိုင် ???
ဟိုဆေး Miguel Jara Diaz ကို ဟုသူကပြောသည်
Dandi ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်ဤပြproblemနာ ရှိနေ၍ ကျွန်ုပ်မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းသောမာစတာနှင့်သန့်ရှင်းသောဆေးများကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်ခဲ့ပါပြီ… SalU2s …José Miguel ။
José Miguel Jara Díazကိုပြန်ပြောပါ
သင့်အားများစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နံနက်တိုင်းကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးတွင်ရပြီ G \_ t
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ငါ BIG DANDI ကိုဆိုလိုတာ
ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ SMART ADMINISTRATOR application ကိုပိတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောမာစတာလိုအရာတစ်ခုခုကိုအလုပ်လုပ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုကယ်လိုက်ပြီ။ သန့်ရှင်းတဲ့မာစတာကို uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်။
သန့်ရှင်းသောသခင်အားမဖယ်ရှားဘဲပိုကောင်းသော DANDI ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကောင်းချီးရှိသောမျက်နှာပြင်၏လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှားပါ…သင်အလွန်ကြီးသည် !!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီ fuck ဆိုတဲ့ app ကပြproblemနာပါ
မျက်နှာပြင်ဖုံးခြင်းကငါ့ကိုခါးသီးသောလမ်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်များပြီးနောက်, ငါ့အမှု၌ CM Locker program ကို uninstall လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။
whatsaap အတွက်ငါသုံးတဲ့ applications တွေကိုဖျက်ပစ်ရမယ်
ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမာစတာ uninstalled နှင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်း ...
ငါ4သင်ခန်းစာများကဲ့သို့မြင်ငါဘာမှနားမလည် ... အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ငါဆော့ဗ်ဝဲကိုပြုပြင်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါပြcနာပြန်ပေါ်လာတဲ့အထိဒါဟာကျွန်တော့်ကိုရူးသွပ်စေခဲ့တယ်။ Du speed booster App ကို uninstall လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါ့အဖြေကိုရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ application တွေက memory memory ကိုပြtheနာရှိတယ်ထင်တယ်
မင်္ဂလာပါဖာနန်ဒို၊ တနင်္ဂနွေ ၂၈ ရက်ကတည်းကကျွန်ုပ်မှာမျက်နှာပြင်ထပ်ပြproblemနာရှိနေတယ်။ ငါအသစ်နှင့်ကောင်းသောအရာအချို့လေ့လာသင်ယူဗီဒီယိုအချို့ကြည့်ရှု; ဒါပေမယ့်ပြtheနာကိုမဖြေရှင်းခဲ့ပါဘူး ပြSPနာကိုဖြေရှင်းရန် DO SPEED BOSTER ကို uninstall လုပ်ရန်သင်၏မှတ်ချက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Carlos Augusto ကိုပြန်ပြောပါ
Good Night Nilsa၊ Easy Taxi နှင့် Watsap နှစ်ခုဖြင့်ပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ Franc Ch ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်လိုက်နာခဲ့ပြီးဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ငါ Franc CH ကျေးဇူးတင်ရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုယူ။
Ami လည်းကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဖြေရှင်းနည်းရှိတယ်၊ ဝေးဝေးမှမထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တော့ဘူး၊ ငါ့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုအဆင့်မြှင့်ထားတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကိုမဖြစ်မိစေဘူး ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုကိုအဆိုပြုထားတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရမယ်။ ဆိုလိုတာကသင့်မှာဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးခွင့်ပြုချက်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုစီမံတဲ့အခါပwhenိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ပရိုဂရမ်တခုခုရှိနိုင်တယ်၊ ငါ app ကို uninstall လုပ်ဖို့အဆိုပြုထားတယ်။ App တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုမှခွင့်ပြုချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထိုအရာအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်သည်သင့်အတွက်ကောင်းပြီး၎င်းကိုပြုပြင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖြေရှင်းချက် desistale clena master ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်သင်ပြသသောအခါဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်ကိုလွတ်မြောက်စေမည့်မည်သည့် application ကိုမဆို shortcut တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့နာရီပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါ ၁၀ ခုရှိတယ်။ chuca.cris27@gmail.com
ငါမှတ်ချက်4ရှိသည်နှင့်ငါ Poquemon go ကို install လုပ်သည့်အခါဖြစ်ခဲ့သည်ထင်လမ်းမရှိသော .. အစဉ်အမြဲအကြီးအအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး .. ယခုငါပြခန်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ
မင်္ဂလာပါထရီဇာ၊ မင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သလား။ ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာ၊ ငါ Pokemon Go ကို install လုပ်ပြီးပြhaveနာကိုငါစတင်ခဲ့သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ ငါ့ဖုန်းကို reset လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ငါ့မှာသန့်ရှင်းတဲ့ master (သို့) ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါ fps gps နဲ့ pokemon ကိုသုံးခွင့်မရှိတဲ့ပြproblemနာရှိနေသေးတယ်။ ငါက settings ထဲမှာ activate လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒီ application အတွက် pop-up ခလုတ်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။
ငါစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေပြီ၊ ဒီနည်းကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမသိဘူး။ ငါအားလုံးဤလောကတှေးတှေ့ရ PRISM ထည့်သွင်းပေမယ့်ငါကရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ခြုံငုံပြPROနာနေဆဲ။ WHATSAPP သည်အဆက်အသွယ်များကိုမရရှိသေးပါကသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများကိုချ ချ၍ မရပါ။ မှားယွင်းနေသည်
Dandi ကို ကျေးဇူးတင်၍ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောသန့်ရှင်းသောမာစတာကိုဖယ်ထုတ်ရုံသာပြုပါ
ကျွန်ုပ်တွင်သန့်ရှင်းသောမာစတာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၌ပြtheနာရှိနေပါသည်။ အလားတူပappိပက္ခဖြစ်စေသည့်အလားတူအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပါသလား။
ပြီးပြီ ငါ DU SPEED ဘူတာကိုဖြုတ်ပြီးအဲဒါကိုပြင်လိုက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါအားလုံး haha ​​uninstall လုပ်ခဲ့လျှင်တကယ်အပူတပြင်း2ရက် batayando နှင့်အားလုံး solusionado alfiiiiiin
Jr Pareded ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ကို DU မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
Jr Pareded မှစာပြန်ရန်
Dandi ... တစ်ထောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသူကပြောတယ်ကို ၆ နာရီလောက်ဖြေရှင်းချင်ခဲ့တယ်။ အခုသင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုဖတ်တဲ့အခါငါသန့်ရှင်းတဲ့မာစတာကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ... အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်အတွက် Dandi၊ သန့်ရှင်းသောမာစတာကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
ငါ Samsung Gear ကို install လုပ်ပြီးကတည်းကဒီပြသနာရဲ့နောက်ထပ်သားကောင်တစ်ယောက်ပါ။ ငါလျှောက်လွှာကို uninstall လုပ်ပြီးပြီ။ သူကပြောတယ်မျက်နှာပြင်ထပ်နေတဲ့အတွက်လျှောက်လွှာတစ်ဝက်လောက်အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဒီတစ်ခုကယူနစ်ကိုအစပျိုးခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးသမားအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရမယ်ဒါပေမယ့်အဆုံးအတွက် wasa ထဲကို ၀ င်ဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူး
ကျွန်ုပ်တွင်မှတ်ချက် ၄ ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းကိုမပိတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်တောင်းဆိုသည့်လျှောက်လွှာ၏ခွင့်ပြုချက်သည်လမ်းမရှိတော့ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မျက်နှာပြင်သို့သွားသောအခါလျှောက်လွှာသည်မိုက်ခရိုဖုန်းသုံးနိုင်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျစသည်တို့သည်ဘာမျှမလုပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ
ရုသသည် alcarraz ဟုသူကပြောသည်
Javier၊ မင်းလိုပဲငါ ၄ ရက်နဲ့ ၂ ရက်လောက်မှာမှတ်သားထားတယ်၊ ငါဒီခေါင်းကိုက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ မိနစ်က ram နဲ့ space တွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့ apps တွေကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ စင်ကြယ်သောမာစတာအဖြစ်။ Du booster ။ Du Batery .. CM Locker နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကျွန်ုပ်သည် WhatsApp နှင့် Facebook Messenger ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ .. ငါရူးသွားပြီ .. !! တစ်ခုခုသင် chevre ကူညီပေးသည်ဆိုပါက .. !!
Ruth alcarraz အားပြန်ပြောပါ
David Martinez Garcia ဟုသူကပြောသည်
မနေ့ကငါ bq aquaris m5 ကို update လုပ်လိုက်တယ်။ ဒီကိစ္စဟာဒီနေ့စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်၊ ငါဘယ်လိုဖယ်ရှားရမှန်းမသိဘူး၊ သင်၏မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသောစူပါသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကို uninstall လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ဆက်ဖြစ်နေသည်။ ငါသည်လည်းစင်တီမီတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့ကြောင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုခွင့်ပြုပါ။ ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ရေးရမည်ကိုမသိပါ၊ ၎င်းကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေပါသည်။ သငျသညျမျက်နှာပြင် overlay ကိုကျော်သွားကြဘူးလျှင်မည်သည့်သန့်ရှင်းရေး application ကို xq
David Martinez Garcíaကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင် Z5 Premium ရှိပြီးမည်သည့် application ၏ overlay ကိုသက်ဝင်ခွင့်မပြုပါ။ ငါ့မှာသန့်ရှင်းတဲ့သခင်မရှိသလိုဘာမှမရှိဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ပြီးသားမှစ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်ဖတ်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်မသိသောကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်တွင်၎င်းသည် Clean Master application group မှဖြစ်ရမည်ဖြစ်သော CM Locker ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အဖြေကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်၎င်းတို့သည် Lux Lite, Twilights နှင့်အခြား application များကို uninstall လုပ်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုဖို့စဉ်းစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာကသင်သော့ကိုနှိပ်ခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်အပလီကေးရှင်းများအားတစ် ဦး ချင်း၊ အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးနှင့်သိုလှောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကအကြောင်းနောက်တဖန်မသိရ, မျက်စိကန်းသောသူကိုရိုက်နှက်ဖို့ဘယ်လိုသာငါသိ၏။
ဒီမှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကတော့ screen overlay ကသင့်ဖုန်းကိုနံရံနဲ့ကပ်ချင်စေလို့ပါ။
သန့်ရှင်းတဲ့မာစတာကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်လိုက်တာကမဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့်ဆရာဝန်ဘက်ထရီနဲ့နှုတ်ဆက်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လက်ကိုင်ဖုန်းဟာငါ့အတွက်ပါ။ သင့်မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Rodrigo colli ဟုသူကပြောသည်
Pfff သည်ကြာရှည်စွာရှာဖွေပြီးနောက် uninstall လုပ်သည့် application သည်ညွှန်ပြထားသော« Midnight »ကိုထိပါ။ ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချသည့် application တစ်ခု (ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကွယ်သွားသည်ကိုသင်သိသည်) နှင့်ယခုဤပြofနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသူများသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများ၊ တောက်ပမှုကိုလျှော့ချပေးသောသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်ဖုန်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသူများသည်ရှာဖွေရန်အတွက်ရှာဖွေကြသည်။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါ့မှတ်ချက်ကမင်းကိုကူညီပေးမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
Rodrigo Colli အားပြန်ပြောပါ
Carla gonzales ဟုသူကပြောသည်
။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ မေးခွန်းမှာဤအပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါကကျွန်ုပ်သည်ဆဲလ်ဖုန်းကိုမည်သို့ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်မည်နည်း။
Carla Gonzales အားပြန်ပြောပါ
ခင်ဗျားကိစ္စမှာဘယ်ပြreinနာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့မချင်းငါသူတို့ကိုအဆင့်ဆင့်တစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးအဆင့်တိုင်းမှာအခြေအနေကောင်းမနေဆိုတာကိုစစ်ဆေးတယ်။ သူတို့အားလုံးမပါဘဲသင်လုပ်စရာမလိုပါ။ ဥပမာ - ကျွန်ုပ်သည် Clean Master Lite ကို ဆက်၍ အသုံးပြုရန်မလိုပါ။
Joako mariaca ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်သန့်ရှင်းသောမာစတာသို့မဟုတ်အခြားအရာများကဲ့သို့သောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများမတပ်ဆင်ထားပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အဖြေကိုရှာတွေ့နိုင်ပြီးအိမ်၊ နောက်ကျောနှင့်မီနူးခလုတ်များသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်ချိန်ညှိချက်များ> မြင်ကွင်းနှင့်နောက်ခံ> လည်ပတ်မှုသို့သွားပါ။ တစ်ဖက်> side key panel နှင့်ထို option ကို disable လုပ်ပါ
Joako Mariaca သို့ပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၄ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါကိုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်မှတ်ချက် ၄ ခုရှိသည်။ ချိန်ညှိချက်များ၊ အမြန်ချိန်ညှိချက်များ၊ မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ခံ၊ တစ်လက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှု ၃ ခုလုံးကိုပိတ်ထားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်နာ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာမိုဘိုင်းဖုန်းရှိတယ်၊ အခြေအနေကအတူတူပဲဖြစ်ပေမယ့် terminal ပေါ်မူတည်ပြီးဖြေရှင်းနည်းကမတူကြဘူး။ ငါ၏အမှု၌, သင့်မှတ်ချက်ပေးမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်က floating ခလုတ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ရိုးရှင်းပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပိုမိုစိတ်ပျက်ဖွယ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသော bullshit ထည်ကိုသွားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Ana ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီဆိုးရွားသောထပ်ဆောင်းမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်လများစွာရှိခဲ့ပြီ။ ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့သည်။ စက်ရုံမှအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါ့မှာပြproblemနာရှိတယ်၊ ငါမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ ဖုန်းကိုအစမှပြန်ယူပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် (ဘေးဘက် panel ကိုပြန်ထားသောအခါ၊ ) ကျွန်ုပ်ထပ်မံဖြစ်ပွားပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်စတင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုတွေးထင်နေခဲ့သည် ခြစ်ရာကနေကျော်။
Samsung က Note6၏ version4တွင်မှားယွင်းနေသည်။
Alejandro Correa ဟုသူကပြောသည်
ကိုလံဘီယာမှသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ ငါပစ္စည်းကိရိယာကို reset လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နံရံနဲ့ထိလိုက်မယ်။ ကျွန်တော့်နဂါးငွေ့တန်းမှတ်စု4ကပြန်လာပြီ
Alejandro Correa အားပြန်ပြောပါ
Joako Mariaca အလွန်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီရေပေါ်သောသော့များသည်ထိုပြtheနာဖြစ်သည်။
မင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ့ထပ်နေတဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ် .. ဒါကြောင့်ငါ့ကိုပconflictိပက္ခဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ CM Locker .. စင်ကြယ်သောမာစတာ။ ။ Du Batery .... ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုငါလွှင့်ပစ်တော့မယ်။ ကျွန်ုပ်၌မှတ်စု ၄ ရှိ၍ ၎င်းကိုမြေကြီးသို့ ၂ ရက်မျှပစ်ချချင်ခဲ့သည်။ ... ကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ။
ပို့စ်ကိုထုတ်ဝေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်မှတ်ချက်များအားလုံးသည်သဲအပေါင်းထည့်လိုက်သည်။ !! …
သင်ကြည့်ပါကဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အမှုတစ်ခုစီတွင် uninstall လုပ်ရန် application များသည်အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Clean Master သည်မဲအများစုကိုစုဆောင်းပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြfollowsနာသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လျှောက်လွှာတစ်ခုမှလာခြင်းမဟုတ်ဘဲအခြား site တစ်ခုမှလာခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်လုံးဝမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ Joako ကအရိပ်အမြွက်ပေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိစ္စမှာ application တစ်ခုကို uninstall လုပ်ဖို့မဟုတ်ပေမယ့်ငါအတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူပြောခဲ့တဲ့ configuration options တွေကငါ့ Android မှာမရှိဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နက်နဲသောအရာကိုရှင်းလင်းရန် Sherlock Holmes ကိုစောင့်ဆိုင်းကြပါစို့။ ရုသ်သည်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုမစွန့်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမတိုင်မီကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်အကြီးအကျယ်နာကျင်မှုနှင့်အတူငါလုပ်တော့မည့်စက်ရုံသို့ပြန်သွားခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အချက်အလက်များ၊ အပလီကေးရှင်းစသည်တို့ကိုဆိုလိုသည်။
ငါ့မှာအဲဒီ application တွေ install လုပ်ထားတာမရှိဘူး၊ အခုငါတောင်မှဆိုးဝါးတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တောင်ခွင့်မပြုဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းက Samsung S5 ပါ။ ကျွန်တော်မှာပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ရုတ်တရက်အားလုံးဒီကိုရောက်လာတယ်။ အမှန်တရားကအရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုများတယ် တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်မယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါသန့်ရှင်းသောမာစတာ uninstalled နှင့်ပြproblemနာကိုဆက်လက်။ ထို့နောက် cm လုံခြုံရေးကို uninstall လုပ်ပြီး misoi ကိုတည့်မတ်ပေးလိုက်ပါ
အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသန့်ရှင်းသောမာစတာ uninstalled
အမြှောင်, ငါဒီချည်ထဲမှာငါတို့ရှိသမျှသည်အပျော်တမ်းဖြစ်ကြပြီးအဘယ်သူမျှကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ဒီ application ကို uninstall လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြtheနာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းပြီးပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူသိသနည်း ဒီဟာသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးခုကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။
1) Joako ရဲ့မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ သူကပြproblemနာကိုနောက်နည်းတစ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့သူပဲ။
၂။ Settings / Applications သို့သွားပါ။ Applications များကိုပြုပြင်ပါ (သို့) စီမံပါ (ဤသည်မှာ Android မူကွဲပေါ်တွင်မူတည်သည်) ။ အတူကစားရန်ကဏ္ two နှစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။ လျှောက်လွှာခွင့်ပြုချက်များနှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင်ပြပါ။ ခွင့်ပြုချက်များကဏ္applicationsတွင်မည်သည့် application များသည်သိုလှောင်ခြင်း (သို့) အဆက်အသွယ်များ၊ သို့မဟုတ်ကင်မရာသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ။ အခြားအပလီကေးရှင်းများပေါ်ရှိ Show တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်၎င်း application အများစုအတွက်ဟုတ်သည်ကိုစစ်ဆေးသည်။
၃) အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအားလုံးသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကနျူကလီးယားခလုတ် - ဖုန်းကိုသင် ၀ ယ်သည့်အချိန်နှင့်ထပ်တူအခြေအနေသို့ပြန်သွားပါ။ ချိန်ညှိချက်များ / အရန်ကူးတွင်ဒေတာအရန်ကူးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြန်ယူခြင်း option ကို (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ LG တွင်ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်း) ကိုသက်ဝင်စေပြီးနောက် "စက်ရုံအချက်အလက်များပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း" ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်မြည်း၏နာကျင်မှုဖြစ်သည်။ သင်သည်အမျိုးမျိုးသောချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သော်လည်းသင်၏ဖုန်းကိုပြန်လည်ရယူရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည် (ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကမကူညီလျှင်)
Android ကိုဖွားမြင်သောမိခင် ...
Psole သင်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆန်းစစ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုမဖျက်ဆီးရန်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နေမကောင်းဖြစ်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တွင် samsung galaaxy s6 ရှိ၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်သင်ရှင်းပြခဲ့ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါစို့၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
Jonathan Sayes ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးတော့ပြtheနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်၊ ဖုန်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ restart လုပ်ပြီးပြီဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jonathan Sayes ကိုပြန်ပြောပါ
ယောက်ျားများငါပြီးသားစိတ်အားထက်သန်အတွက်မျက်နှာပြင်ထပ်ရန်ပြတ်ပြတ်သားသားအဖြေကိုရှိသည်အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငါ cken မာစတာပြီးတော့ဘက်ထရီဆရာဝန်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့မှာဖြစ်ပျက်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် YouTube မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်၊ နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ပြtheနာကသူတို့က development options ကို enable လုပ်ပြီး enable လုပ်လိုက်ရင် Inactive apps လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံး box ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်။ သူတို့ရှိရင်ပြapplicationနာဖြစ်စေတဲ့ application ကိုရှာလိုက်ရင်သူတို့ကထိလိုက်၊ ဒီနည်းနဲ့သူတို့ကမလှုပ်မရှားထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကဒီအကျိုးသက်ရောက်ရန်အချို့သောကိစ္စများတွင် cel ကိုပြန်လည်စတင်ရန်သာရှိသည်။ ထို့နောက်သူတို့ကညှိနှိုင်းမှုအတွက် applications များသို့သွားလျှောက်လွှာကိုရှာဖွေနှင့်ကခွင့်ပြုချက်အားလုံးပေးရမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းယောက်ျားတွေဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အဲဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုငါဖျက်သိမ်းပြီးပါပြီ။ အဖြေရှာလို့မရဘူး ထိုအခါငါကအရမ်းအဆင့်မြင့်သောပြီးသားဂိမ်း x စက်ရုံကနေပြန်မလိုချင်ကြဘူး, ငါ့ကိုကူညီပေးရန်တစ်စုံတစ် ဦး ။
ငါပြောနှင့်ပြီးပြီဆိုတာကိုသာငါစဉ်းစားနိုင်သည်: Settings / Applications / Applications / Configuration ကိုစီမံခန့်ခွဲပါ။ Applications ခွင့်ပြုချက်များနှင့်ဤအပိုင်း၊ အထူးသဖြင့် Storage ရှိအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ သံသယဖြစ်လျှင်အပိုပါမစ်များထုတ်ပေးသင့်သည်။
Joako ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ရဲ့မိုဘိုင်းမှတ်စု ၄ အတွက်အဖြေပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်ဒီခွင့်ပြုချက်ပြwithနာနှင့်သုံးရက်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။
Joako ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက် ၄ ရက်အကြာမှာ ၄ င်းကိုကျွန်ုပ်၏မှတ်စု ၄ တွင်လည်းပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြproblemနာကတော့ sidebar tab ဖြစ်တယ်။ Adjusted, quick settings, screen နှင့်နောက်ခံ၊ တစ် ဦး တည်းသောလုပ်ဆောင်မှုများတွင် options သုံးခုကိုရိုက်ထည့်ပြီး deactivate လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒါပြီးပြီဟုမထင်ပါ။
Dandi, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသောမာစတာကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်ကိုမဖတ်ခင်ဆဲလ်ဖုန်းကွဲလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်
Dandy စုစုပေါင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! သန့်ရှင်းတဲ့မာစတာထွက်။ ဆဲလ်အိုကေ။
ငါ MILLLLLL ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။SSSSSSSSSSSSSS ငါ၎င်းကိုပြီးမြောက်အောင်ဖြေရှင်းခဲ့သည်
Ariel ajhuacho ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ xperia z3 တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်
Ariel Ajhuacho အားပြန်ပြောပါ
julius villasmil ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မှတ်စု ၄ တွင်သန့်ရှင်းသောမာစတာသို့မဟုတ်အခြားအရာများကဲ့သို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများမတပ်ဆင်ထားပါ၊ သို့သော်အဖြေကိုကျွန်ုပ်ရှာတွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်အိမ်၊ နောက်ကျောနှင့်မီနူးခလုတ်များမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည့်၊ နောက်ခံ> တစ်ဖက်လည်ပတ်မှု> ဘေးထွက်သော့ခလုတ်နှင့်ထိုရွေးစရာကိုပိတ်ထားပါ
julio villasmil အားပြန်ပြောပါ
Julio Villasmil, မင်းကအကောင်းဆုံးပါ။ ငါအများကြီးပရိုဂရမ်များနှင့်ဘာမျှမ uninstalling စတင်ခဲ့သည်။ မင်းပြောခဲ့တာတွေ wowwww ကိုငါမလုပ်မချင်းတော့ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းလိုက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
PT နည်းပညာ (@turiano_rosario) ဟုသူကပြောသည်
PT Technology (@turiano_rosario) အားစာပြန်ခြင်း
Rocío Terrazas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သဲလုံးလေးကိုချန်ထားချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းကိုမကူညီနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ့မှာ Samsung Note4ရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးထားတယ်၊ တခဏမှနောက်တစ်ခေါက်အထိငါမျက်နှာပြင်ထပ်ပြtheနာနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်၊ စကားမစပ်နှောင့်နှေးတာထက်ပိုပါတယ်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ သင့်အားရွေ့လျားခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ထိုနေ့၌ပင်ဖြေရှင်းပါ။ ဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော Prisma နှင့် Pokemon Go ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ပြproblemနာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ငါ့ကိုဖုန်းတပ်ဆင်ထားသူတစ် ဦး ဦး က၎င်းကို install လုပ်လိုလျှင်မလုပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ hahaha
ကောင်းပြီ၊ ငါပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ ငါ Messenger ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားတယ်။ ဆိုလိုတာကငါ chat bubble ကိုရတယ်။ ငါအလွယ်တကူလုပ်လိုက်တာကအဲဒါကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကငါ Messenger ကိုခဏရပ်လိုက်ပြီးပြtheနာကိုဖြေရှင်းလိုက်တယ်။ ပြtheနာဖြစ်ပွားနေတဲ့ applications တွေအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ရိုက်ထည့်ပြီးကင်မရာ၊ သိုလှောင်မှုစသည်ဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ငါ applications များပိတ်ထားခြင်းအားဖြင့်ဒီရလဒ်ကိုရောက်ရှိ, ဒါပေမယ့်သင်၌ငါနှင့်တူသောဆဲလ်ဖုန်းရှိပါက, ငါ့စိတ်ကူးသင်တို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Rocío Terrazas အားပြန်ပြောပါ
ယောက်ျားတွေဒီ APP ကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒီအက်ပ်ကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်မဆိုးပါ။ PREVIOUS COMMENT ကိုကြည့်ပါ။ ဒီသတ်မှတ်ချက်ပြSနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာရှင်းပြနိုင်မယ့်ပုံ။ သူတို့က APP ကိုပိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်သူတို့ကဒီပြBနာကိုထပ်ပြီးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက်တွင်လျှောက်လွှာအားတက်ကြွစွာမည်သို့တင်သွင်းရမည်ကိုရှင်းပြပါ၊ ခွင့်ပြုချက်ကိုသင့်အားပေးနိုင်ပါသည်။
ကောင်းသော Lian ။
ငါစူပါမျက်နှာပြင်နှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိသည်, ငါစက်ရုံ reset မိုဘိုင်းကြောင့်ငါ့ကိုဖြစ်ပျက်ဆက်လက်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမျှ သုံး၍ မရပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုအတွက်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံသောကြောင့်၎င်းကိုသူတို့အားပေးလိုသောအခါ၊ ငါ developer ရွေးချယ်စရာများတွင်သင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းကိုပြန်လည်စတင်သောအခါလျှောက်လွှာကိုပြန်လည်အသက်သွင်းသည်။
ငါ့မှာ Xperia Z3 ရှိတယ်၊ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
ကောင်းသောနံနက်ခင်း Alvaro, ငါအက်ပလီကေးရှင်းကိုမလှုပ်မရှားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်၊ ငါဆဲလ်ကို restart လုပ်လိုက်တယ်။ ခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့သွားတဲ့အခါမှာဒီ app ကတက်ကြွနေဆဲဖြစ်လို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်လာတာပါ။ ကျွန်ုပ်မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ချိန်ညှိချက်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ လျှောက်လွှာကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုပေးရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒီလိုမျိုးစမ်းကြည့်ပါ၊ ၂ ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ငါ့အတွက်ဒီနည်းကထွက်လာပြီလား၊ ငါ့ကိုမပြောပါဘူး၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသုံး '' တစ်လက်စစ်ဆင်ရေး 'သေတ္တာများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ !!!! android, Samsung သို့မဟုတ်မည်သူမဆို၏ကျရှုံးမှု ......
မင်္ဂလာပါကယ်ရိုလိုင်း၊ ခင်ဗျားကဒီပြသနာကိုခဏသာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်သင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့ငါ့ရဲ့မှတ်ချက်ကိုရှာပါ။ မင်္ဂလာပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် dandy, အကယ်၍ မင်းအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်ငါဒီပြproblemနာကိုဆက်လုပ်လိမ့်မယ်
Naty Liz Cantuña ဟုသူကပြောသည်
Du Battery ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် du master သည်ပြfixedနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ ... ငါရူးသွားပြီ။
Naty Liz Cantuñaအားပြန်ပြောပါ
ငါ၌မှတ်ချက်4ရှိပြီးမျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ခံ (ရွေးချယ်စရာ ၃ ခုကိုပိတ်ပါ) မှန်ကန်သည်၊ ယနေ့သည်အလွန်ဆိုးသောနေ့ဖြစ်သည်
Joshua Castro Marin ဟုသူကပြောသည်
ငါ option ကို disable လုပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်မပိတ်သေးဘူး၊ no လို့အမှတ်ရတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ကိုငါလိုချင်ရင်ငါ configuration ကိုပြန်သွားတယ်။ ရှာတဲ့အခါမှာအဲဒါကို enable မလုပ်ဘူးဆိုတာငါ့ကိုပြောတယ် ခွင့်ပြုချက်သည်သံသရာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Joshua marin castro အားပြန်ပြောပါ
ငါ့အမှု၌ငါ Button Savior ကိုခွင့်ပြုချက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ထပ်မံပေးအပ်ပြီးပြeverythingနာမရှိဘဲထပ်မံအလုပ်လုပ်သည်။ မှတ်ချက်များကိုကြည့်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
marta antunez ဟုသူကပြောသည်
ငါမျက်နှာပြင်ဖုံးအုပ်ထားတယ်၊ အဲဒါကိုသော့ဖွင့်လို့မရဘူး၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ဟာဒူမာစတာကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းကိုလုပ်ပြီးဆဲလ်ဖုန်းကိုပြင်လိုက်သည်။ ကံကောင်းတာကဒါဟာခေါင်းကိုက်ခြင်းကြောင့်
marta antunez အားပြန်ကြားပါ
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တွင်သန့်ရှင်းသောမာစတာသို့မဟုတ်အလားတူပရိုဂရမ်မျိုးမရှိပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မဖယ်ရှားနိူင်ပါ။ ဒီသင်ခန်းစာမီနူးတွေကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဘာ android shit? ငါကအပူတပြင်းနဲ့အချိန်ဖြုန်းနေတယ်
guillermo carrillo ဟုသူကပြောသည်
ငါပြီးသားပြitနာကိုဖြေရှင်း, ကလမ်းအတွက်သော Du မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရေး application ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောချက်တင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
guillermo carrillo အားပြန်ကြားပါ
လူများ၊ သင်အကြံပြုသည့်အဆင့်တစ်ခုစီကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါ၊ ကျော်ကြားသော overlay နှင့်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံမှုကိုသော့ဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ... ကျွန်ုပ်၏ Samsung S7 ကိုကန ဦး ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်ယူပါ။ လိုအပ်သော app တစ်ခုစီကိုသက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်များဖြင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ နှင့်ကျွန်ုပ်၏ Samsung နှင့် Google အကောင့်အတွက်အချက်အလက်များအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူပါ။ ကျွန်ုပ်လက်ကိုသုံးပြီးသုံးပတ်ကျော်လွန်သွားသော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တသမတ်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် !!!!
မှတ်ချက် ၄ မှလွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်က update ပြုလုပ်ကတည်းကယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အားကစား application တစ်ခုတပ်ဆင်သောအခါ (၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဘာမှမတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော) ကျွန်ုပ်သည်မြင်ကွင်း overlay detect၊ settings / applications များသို့သွားပြီး activate လုပ်သော window ကိုရရှိသည်။ ... "ဒါပေမယ့်သူကပြောပါတယ်သောအရာကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤအမှားပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့် wathsapp သည်ကျွန်ုပ်ကိုထပ်တူပြုခြင်းမရှိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ One Plus One ရှိတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ပျက်မှုမျိုးကျွန်တော်မျိုးကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူက application overlay option ကိုတိုက်ရိုက်မထားဘူး။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား Settings_ Write သို့အခြား application များသို့ပို့သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည် YES / NO ကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
ကျွန်ုပ်မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ပြtheနာသည်မိနစ်အနည်းငယ်မျှကြာသွားသော်လည်းမည်သည့်အရာကိုမျှလက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ။ ဓာတ်ပုံ၊ တည်နေရာ၊ စာရွက်စာတမ်းများ ...
ငါ့မှာ app များမရှိဘူး။ ဖုန်းကိုထူးဆန်းစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း။
Juan Calderon ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ သန့်ရှင်းသောမာစတာသည်ပြproblemနာဖြစ်ပါက ... ၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုခွင့်ပြုချက်တောင်းသောသူများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Juan Calderon အားပြန်ကြားပါ
Cynelle Yvonne Lebron ပန်းရောင် ဟုသူကပြောသည်
ရှင်းလင်းသော MASTER ကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့်တစ်ခုလုံးပြPROနာစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ဆက်လက်၍ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာမျှမလုပ်ပါစေ၊ ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းမသုံးနိုင်ပါ။
Cynelle Yvonne Lebron Rosado အားပြန်ပြောပါ
Alci karina ဟုသူကပြောသည်
ရက်များစွာကြာပြီးနောက်အက်ပ်အားလုံးတွင်မျက်နှာပြင်ထပ်ပြapနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ ကွန်ပျူတာကို ၈၀% ဖြင့်အသုံးမ ၀ င်အောင်ကြိုးစားပြီးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာချိန်ညှိချက်များ - နောက်ခံနှင့်လက်ဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၊ အဲဒီမှာရွေးချယ်စရာ ၃ ခုရှိသည်။ ထို့နောက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ qlli မှ whatsaap (သို့) အသုံးမလိုသော application များထဲသို့ဝင်ပါ။ သတိပေးမျက်နှာပြင်ပြန်ပေါ်လာသည်။ yyyyy တူညီသော app မှချိန်ညှိချက်များကိုကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ခွင့်ပြုပေးသည်။ ...
ဒါဟာငါ့အတွက် ... လူတိုင်းအတွက်ကံကောင်းပါစေအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
Alci karina အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung Galaxy S5 ရှိတယ်၊ wasap, Gallery နဲ့တခြား application တွေအတူတူပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမာစတာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြIနာကငါအရမ်းအပူတပြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Yepiz ။ ဟုသူကပြောသည်
တစ်စုံတစ်ယောက်ငါ့ကိုကူညီမလား။ WhatsApp ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကမျှပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်မည်သည့် application မျှမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းမှအရာအားလုံးရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် galaxy s6 ရှိသည်။
ချစ်ခင်ရပါသော၊ ကျွန်ုပ်၌မှတ်စုအမှတ် ၄ ရှိ၍၊ ကျွန်ုပ်အရူးအမူးစွဲလမ်းသွားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဘယ်ဘက်ဘေးဘားကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ချိန်ညှိချက်များ - မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ခံများ - တစ်ဖက်လည်ပတ်မှု - ဘေးဘက်သော့ခလောက် (ထိပ်ရှိခလုတ်မှဤရွေးချယ်မှုကိုပိတ်ပါ)
တစ် ဦး စာပြန်ရန်
David Hernandez အားပြန်ပြောပါ
အခြားဖြေရှင်းချက်များအလုပ်မလုပ်ပါက eye.the ဘေးထွက် key panel သည်ပိတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပြီးဓာတ်ပုံပြခန်းကိုထပ်မံ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်
Mauricio Palazzolo ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ Erii_Pausini မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည်အန္တရာယ်ရှိသည့် application များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
အဆင့် (၁) ။ အောက်ပါ application များကို download လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူသည်၎င်းကို playstore မှ download ပြုလုပ်သော်လည်း၎င်းကို Uptodown မှ download လုပ်သည်။
၂။ CM Security
4. ခေါင်းမာ Trojan လူသတ်သမား
ဒီ pack ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပြီး“ Unknown Sources” ကိုရွေးပါ။
သူတို့ကထိုအစီအစဉ်အတိုင်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုရှာဖွေသည့်အဆင့်များထဲမှတစ်ခုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်စရာများပေါ်လာသည်အထိနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုအေးခဲစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိတ်ပါလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် (၄) ကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်လုံးဝကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများတစ်ပြိုင်နက်။
သူတို့ကကိရိယာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအဲဒီ virus တွေကိုတွေ့ရင် Kill ကိုပေးလိုက်တယ်။
သူတို့က antivirus ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအမှိုက်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။
Mauricio Palazzolo အားပြန်ပြောပါ
ငါ Twilight uninstalling အားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိပါက၎င်းတို့တွင် light filter (၎င်းသည်ဖုန်းပေါ်ရှိအလင်းကို၎င်း၏တောက်ပမှုကိုလျှော့ချစေ) သည်ဆိုပါက၎င်းသည်၎င်းတို့အားအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုချက်ကို activate သို့မဟုတ် deactivate လုပ်ရပါလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်၌ BQ E5s ရှိပြီး Application Manager option ကအသုံးမဝင်ပါ။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး၊ ဓာတ်ပုံတောင်မမြင်နိုင်ဘူး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာတင်မရ၊ whatssap (သို့) လက်တွေ့ကျကျဘာမှမပို့နိုင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်
ငါ CM LOKER နှင့် CM Security ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်
Selene velez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုနည်းစနစ်များဖြင့်ကြိုးစားနေသည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြုပြင်လိုသော application ၏ခလုတ်သည်ပေါ်မလာခဲ့ပါသို့မဟုတ်၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်၊ ကျွန်ုပ်အား screen overlay ၏ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းပေးသောအဖြေမှာ - ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောကျွန်ုပ်၏ဖုန်းများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ တေးဂီတ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အသံမှတ်စုများနှင့်အရာရာတိုင်းရှိအရာအားလုံးကိုပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်မည်သည့်အချက်အလက်သို့မဟုတ် SD ကဒ်မှပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရန်နှင့်ကဒ်မှဖယ်ထုတ်လိုက်ရန် တစ်ချိန်ကဖုန်းနှင့်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားမှမရှိဘဲဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ခွင့်ပြုချက်ရွေးစရာသို့သွားခဲ့ပြီးမည်သည့် application ကို uninstall လုပ်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုအပြည့်အစုံပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုချက်ပြောင်းလဲပြီးသည်နှင့် နောက်တဖန်ဖုန်းပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ငါ့ကိုထပ်တူနှင့်အတူပြproblemsနာများမပေးခဲ့ပါဘူး။
ငါသည်ဤ option ကိုသင်အစေခံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် !!!
ငါက fix နိုင်ခဲ့သည်လူများ !!!!
ငါ overlay blah blah blah ကြောင့်ငါ့ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းသောထိုပြproblemနာရှိခဲ့ပါတယ် ... ငါမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာအမြဲသောအက်ပလီကေးရှင်းတပ်ဆင်ထားကြောင်းထွက်လှည့် ... multi- ကို Windows ထဲကတစ်ခု ... ငါ uninstalled နှင့် sooo !!! ပြနာဖြေရှင်းပြီး
Joshua Tercero အားပြန်ပြောပါ
Silvia ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Garcia က ဟုသူကပြောသည်
ပြjustနာကိုဖြစ်စေတဲ့ application ကိုသင်ရုံနှိပ်ပါ။ ငါအခြား application များပေါ်တွင်ရေးသားခြင်း၏ function ကိုအတွက်အနည်းငယ် disable လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းပြproblemနာ။ ငါ့အမှု၌ငါ cortana နှင့် Mobilgo ကိုမသန်စွမ်းသည် (သူတို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်) ပထမတော့ခွင့်ပြုချက်တွေပေးဖို့ဘက်ထရီကိုချွေတာတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ခြင်း၏လှည့်ကွက်ကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Power Point နဲ့ Telegram applications တွေကသာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သည်းခံခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာများကိုအခြားသူများအားရေးသားရန်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ပိတ်ထားပါ။ ကံကောင်းတယ်
Silvia Gracia Garcíaအားပြန်ပြောပါ
EasyTouch ကိုလည်းထောက်ပံ့မထားပါ။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောမာစတာနှင့်အတူတူပင်အဆင်မပြေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အပလီကေးရှင်းများအားခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ဖုန်းတိုင်းတောင်းဆိုသည့်အတိုင်း overlays များ (system system များပင်) ကိုပိတ်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ခွင့်ပြုချက်မပေးနိုင်။ သူတို့အလုပ်မလုပ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကူညီနိူင်ပါသည်။ ? ငါ့မှာ Android4ပါတဲ့ Samsung Note 6.0.1 ရှိတယ်
ဝီလျံ Encalada ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောသန့်ရှင်းရေး (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ပြီးဖုန်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
Jorge Ungar ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့စင်ကြယ်တဲ့မာစတာကိုထားခဲ့သူဟာအကြွင်းမဲ့ပါရမီရှင်ပါ။ သူ့ကိုအကြံပေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ခန့်ထားတယ်။ သူ့ကိုငှားရမ်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကအဖြေရှာလို့မရဘူး။
Jorge Ungar အားပြန်ပြောပါ
vlvaro Fierro Nunez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Galaxy S7 အသုံးပြုသူဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဤပြproblemနာရှိနေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကြံပြုထားသောအဖြေရှာခြင်းများစွာကိုကြိုးစားခဲ့သည်၊ နောက်ဆုံးတွင်ကွန်ပျူတာကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီခဲ့သည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်သည် configuration နှင့် application manager သို့သွားပြီးနောက်ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ပြproblemနာမရှိဘဲတည်းဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာကိုပုံမှန်အသုံးစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ပြmodeနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်များသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်တွင်ကျန်နေခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Álvaro Fierro Núñezအားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း… ဒါကြောင့်တစ်ခုခုနဲ့သူတို့ကိုကူညီပေးသည်လျှင်။ သန့်ရှင်းသောမာစတာသို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့လုံခြုံရေးအက်ပ်ကိုဖျက်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ပထမ ဦး စွာသင်၏အလွန်အသုံးဝင်သောအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ၊ အသံတည်းဖြတ်ဖို့ဒီပရိုဂရမ်ကကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း၊ လုံခြုံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပရိုဂရမ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဖယ်ထုတ်လိုက်တော့အားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။
ဒါတောင်မှပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Angel Gabriel သို့ပြန်သွားပါ
တကယ်တော့အသိုင်းအဝိုင်း၊ သင်၏မှတ်ချက်များသည်အမှားအယွင်းကိုသဘောပေါက်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အဖြေမှာရှင်းလင်းသည့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမဆိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အမှု၌၎င်းသည် Hello Launcher ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာပြproblemနာဖြစ်စေတယ်
ဒါကကျွန်တော်နှင့် zte blade v7 ကဲ့သို့သောအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ သင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ဖန်သားပြင် superposition သာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် moto g 3, android 6.0.1 ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် settings များထည့်ပြီးသည်နှင့် Application Manager ရွေးချယ်မှုမပေါ်ပါ။ ငါကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် screen overlay နှင့်ထပ်တူပြproblemနာရှိသည်။ သို့သော် Huawei cam L03 ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ whatsaap အဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုတောင်ကျွန်ုပ်အား ၀ င်ခွင့်မပြုပါ။ ကူညီကြပါ !!
MARCO PEREZ ဟုသူကပြောသည်
သင်၏တယ်လီဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော (သို့) ဖယ်ရှားပစ်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုသင်မြင်တွေ့ရသော APPS အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရုံပါပဲ။
MARCO PEREZ အားပြန်ပြောပါ
Julio Cesar AVILA ASAN ဟုသူကပြောသည်
တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ duboster app များ၊ သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်များမှမည်သည့် developer မှမဆိုဘက်ထရီချွေတာသည့်အက်ပ်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်
JULIO CESAR AVILA ASAN သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ ငါ WhatsApp ရှိမြေပုံတည်နေရာကိုသက်ဝင်စေလိုပြီး reset preferences ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ယခုကျွန်ုပ်၏ပြခန်းသို့ပြန်သွားနိုင်ရန်အတွက်မျက်နှာပြင်ထပ်ကိုပိတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အဆက်အသွယ်များကို WhatsApp တွင်ထည့်ပြီး Skype နှင့်အခြား application များထည့်ပါ။ သို့သော်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်သို့မဟုတ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ နောက်အမှားတစ်ခုထပ်လုပ်မိမှာကြောက်မှာပါ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ Moto x ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး Android 6.0 ပါ
Rocio Saal အားပြန်ကြားပါ
HELLO ROCIO သည်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်ရှိသည်သော APPS များကို uninstall တစ်ခုတည်းအတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့်ဖယ်ရှားပေးမည့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရန်သင့်မှာရှိသည့် APPS အားလုံးအလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်တူသည်ကိုတွေ့လျှင်၎င်းသည် APPS များစွာကိုရပ်တန့်လိုက်လျှင်၎င်းသည် IT ကိုပယ်ဖျက်ပါကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကို ကျေးဇူးတင်၍ အသုံးပြုပါကယခုပင် IT အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
Alfonso Javier DíezLópez ဟုသူကပြောသည်
ငါ Twilight ကို uninstall လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
Alfonso Javier DíezLópezအားပြန်ပြောပါ
ယေရှု Adrian ဟုသူကပြောသည်
ငါက Pokemon go ကို uninstall လုပ်ဘို့ငါ့ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
Pokemon go ကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးအရာအားလုံးကကောင်းတယ်
Jesus Adrian ကိုပြန်ပြောပါ
Lola andré ဟုသူကပြောသည်
Vicente Reveron ဟုသူကပြောသည်
Francisco ကကောင်းတယ်။ ငါဘာစီလိုနာမှာညရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါအသေးစိတ်တော့မယ့်ပြyouနာကိုသင်ပေးနေတဲ့ဂရုစိုက်မှုနဲ့အကြံပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
S6 Edge၊ ထိတွေ့မှုမတုန့်ပြန်သည့်အချိန်များရှိသည်။ ငါအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်၊ ၅ မိနစ်ခန့်ဖြစ်ကောင်းထိတွေ့မှုကတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်တခြားအချိန်တွေကနည်းနည်းတော့နည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးပါ၊ ပြီးတော့ touch screen ကလည်းထပ်ပြီးတုန့်ပြန်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်ရှိလဲအဖြေတစ်ခုရှိပါသလဲ။
ဗင်နီဇွဲလား၊ ကရာကက်စ်၊ မင်းဆီကိုစာရေးနေတယ်။ မင်းကိုကူညီနိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါပြောတာတစ်ခုကဒီ application တွေကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းလိုက်တာပဲ
Marco Mancilla ဟုသူကပြောသည်
မည်သည့် APP ကိုမျှသူတို့မဖယ်ရှားသင့်ပါ၊ သူတို့လုပ်သည်ဆိုလျှင်၊ သူတို့နောက်ထပ်အခြားတစ်ခုကိုတပ်ဆင်သောအခါပြproblemနာပြန်လာလိမ့်မည်။ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ developer options ကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် (ဒါက build နံပါတ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်နှိပ်ပြီးလုပ်တယ်) ။ အဲဒီ option တွေမှာ Screen Overlay ကိုလုပ်ဖို့ပြောထားတာတစ်ခုရှိတယ်။ မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမဆိုမဖယ်ဘဲသူတို့သည်သင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
Marco Mancilla အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် j7 ရှိပြီး overlay ကိုဘယ်လို disable လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလိုက်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်မှာ screen overlay ရှိသည်ဟုပြောသောစာတစ်စောင်ရနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာဘာလုပ်သင့်လဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ငါသန့်ရှင်းသောမာစတာကို uninstall လုပ်ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်း။
ငါနောက်ဆုံးမှာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါနိုင် !!! ဤအညွှန်းများနှင့်အတူ:
မင်္ဂလာပါဖိုရမ်၊ ငါသိသလောက်ပြoldနာရှိနေပြီဆိုတာသိပေမယ့်ကျွန်တော့် Samsung s6 or s5 မှာဖြစ်ခဲ့တာကဒီပြseeနာရဲ့အဖြေကိုတွေ့မြင်တဲ့လူသစ်တွေအတွက် settings ကိုသွားတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောစာလုံးကို နှိပ်၍ အပြာရောင်မီးခိုးရောင်သင်္ကေတများနှင့် voila များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအားကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်၍ ပယ်ဖျက်နိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီသည်၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
သင် uninstalling သန့်ရှင်းသောမာစတာရှိပါကငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ whatssap ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေပါသည်။ သို့သော်ခွင့်ပြုချက်များတောင်းသောအခါ overlay ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းသော်လည်း၎င်းကို deactivate လုပ်လိုက်သောအခါ whatssap application မပေါ်လာပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ မှန်ကန်စွာထည့်သွင်း။ မရပါ။ … .. ???????
STEPHANIE MADRID သို့ပြန်ပြောပါ
Eliecer Becerra ဟုသူကပြောသည်
Whatsap မိုက်ခရိုဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောပြproblemနာရှိသည်။ ငါ့ကိုကူညီပေးသည်၊ မျက်နှာပြင်ကိုကြားဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ငါပြောသမျှအဆင့်တိုင်းလုပ်ပြီးပြီ။
Eliecer Becerra အားစာပြန်ပါ
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ မင်းရဲ့ဗွီဒီယိုကဘာလဲဆိုတာကိုပြသပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဆယ်မိနစ်နီးပါးအလဟ was ကုန်သွားသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်သည် j7 2016 ရှိသည့်အပြင်ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်သည် cm Locker မှနောက်ခံပုံများနှင့်ဖန်သားပြင်နှင့်၎င်း၏အိုင်ကွန်များအားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ရှိခဲ့သည့်ဖြတ်လမ်းအားလုံးနှင့်ဖျက်ပစ်လိုက်သောအရာများအားရုတ်တရက်ကူးယူခဲ့သည်။ လုပ်ထားတဲ့gရာမ၊ ငါဘာလုပ်သလဲမသိဘူး၊ ငါ့မှာရှိထားတဲ့နောက်ခံအရာအချို့ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြီ၊ ဘာမှမလုပ်၊ ဘယ်လိုပြုပြင်ရမှန်းမသိဘူး။ touchz၊ ကန ဦး touchz browser ကိုသုံးရန်ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်2ထဲမှတစ်ခုကိုသာနှိပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ခင်ဗျား Settings ထဲကိုဝင်လိုက်ရုံပါပဲ။ Dots သုံးခုရှိသည့်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ထပ်မံ၍ Default applications ကိုနှိပ်ပါ။ Start Toucwiz ကိုရွေးချယ်ပါ။
ငါ superscreen ကိုဖယ်ရှားလို့မရပါဘူးအလုပ်ဖြစ်တယ်
Manuel Maneiro ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် system တစ်ခုအပါအ ၀ င် application အားလုံး၏ဖန်သားပြင်၏ overlay ကိုပိတ်ထားပါကခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Manuel Maneiro အားပြန်ပြောပါ
Ana မာရီယာ Alvarez ဟုသူကပြောသည်
ဟီဆန်ကိုကို၊ မင်းရဲ့ဗီဒီယိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကအရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာ Motorola G2 ရှိတယ်၊ အဲဒီ menu ထဲဝင်တဲ့အခါစာရင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ applications တွေအားလုံးကို overwrite လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားပေမဲ့ (အစကန ဦး ဖျောက်ထားခဲ့သည့်စနစ်များကိုငါပင်ပြန်မချန်ဘူး။ ) ကျွန်ုပ်သည် WhatsApp အားဆက်သွယ်ရန်၊ မိုက်ခရိုဖုန်း၊ ကင်မရာသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကိုမဆို ၀ င်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ကူညီရမည်ကိုသင်စိတ်ကူးရှိပါကကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။
Ana María Alvarez အားပြန်ပြောပါ
ငါထပ်ဆင့်မှုအားလုံးကိုပိတ်ထားပြီးပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးသည်။ သူကကျွန်ုပ်အတွက် WhatsApp ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုပိတ်ထားသည်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
jose ramirez ဟုသူကပြောသည်
ငါအရာအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် WhatsApp ကိုခွင့်ပြုချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်မကိုဘာအကူအညီရမလဲမသိဘူး
jose ramirez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင် S7 ရှိသည်။ ၎င်းကို၎င်း၏စက်ရုံသတ်မှတ်ချက်များတွင်ထားပြီးနောက်အရန်အချက်အလက်များကို၎င်းထံပေးပို့ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Settings ကိုသွားပြီး Applications Manager ထို့နောက် Applications Manager နှင့်ထိပ်ဆုံးတွင် option ကို ထပ်မံ၍ ပေါ်လာနိုင်သည့် Applications ကိုရွေးချယ်ပါ။ 360 လုံခြုံရေးနှင့် 360 လုံခြုံရေး lite ကိုပိတ်ပါ။ နှင့်အဆင်သင့်။ မည်သည့် antivirus နှင့် Go ကိုမဆို disable လုပ်နိုင်သည်။ ပြေ
ကျွန်ုပ်မှာ wahtsapp ကိုခွင့်ပြုချက်မရနိုင်သောအလွန်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ရှိခဲ့သည့်ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒီရောင်းချသူလေးကကျွန်တော့်ကိုဆက်လက်ထွန်းလင်းပေးနေပါတယ်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းများ !!! သူတို့ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ !!! ငါအရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်စတင်မှီတိုင်အောင်, ငါဘာမှနှင့်အတူထွက်ရနိုင်ဘူး! တစ်ခုချင်းစီကို uninstall လုပ်ရန်နှင့်မည်သည့်ပconflictsိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ input ကိုအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!
လော်ရာ CabellosdeAura (@_roja) ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါတို့ပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ပြsolveနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဈေးကြီးပေးဖို့မလိုပါဘူး။ အခုငါ instagram နဲ့ထပ်တူပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​အထူးသဖြင့် boomerang နဲ့ငါသူတို့ညွှန်ပြတာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုကွန်ပျူတာ၊ instagram, boomerang နဲ့ whatsapp တွေမှာရှိတဲ့ application အားလုံးပျောက်နေတယ်ဆိုတာမပြဘူး။ အဲဒါကို fix ရန်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည်တစ်ပတ်အကြာ ZTE blade A310 ဖြစ်သည်။ အာမခံကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသလား။
Laura CabellosdeAura (@_roja) ကိုစာပြန်ပါ
အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးရက်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ဤဖိုရမ်မှတစ်စုံတစ်ယောက်အားဤအကြံပြုချက်နှင့်ရလဒ်သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းလုပ်ဆောင်ရန် DU SPEED BOOSTER ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ရိုလန်ဒိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါတို့တိုကျိုအထိ။
Hello, developer များ၊ လက်တင်အသံဖြင့်ရုပ်ရှင်များကိုမည်သို့မည်ပုံနားထောင်ရမည်ကိုသိပါသလား၊ ကျွန်ုပ်တွေ့သမျှရုပ်ရှင်အားလုံးသည်ဥရောပမှ“ Spanish” မှအသံနှင့်အတူ; သူတို့ကိုလက်တင်ဘာသာစကားဖြင့်နားထောင်ရန်နည်းလမ်းရှိပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်
အကယ်၍ ဤ Screen Overlay နှင့်သင်ပြproblemsနာရှိပါကကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုချက်များလျှောက်ထားခြင်းကိုတားဆီးသောလျှောက်လွှာကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် ES File Explorer (ES Swipe) ကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းသည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ငါကပိတ်ထားနှင့် voila! ?
ငါ ES Explorer ကို uninstall လုပ်ရတယ်, ထိုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်
သင်၏ play store မှမည်သည့် application ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိုသည်
နှင့်လတ်တလောသူတွေကိုဖယ်ရှားနှင့် overlay ကိုခွင့်ပြုချက်ကိုစမ်းသပ်။ ဘယ်လောက်လဲ
ကျွန်ုပ်တွင် Huawei P8 Lite ပထမမျိုးဆက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအရာပေါ် မူတည်၍ ထပ်နေသည်မှာရက်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မှာငါ Wallapop ကိုသုံးပြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုတင်ဖို့အတွက်ငါကထပ်နေတဲ့ငါနဲ့ကျွန်တော်ထိမိတဲ့အရာကြောင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်ခွင့်မပြုတော့ဘူး။ ဒါဆိုငါနဲ့အတူ WhatsApp မှာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့တယ်။ အခုအဆက်အသွယ်တွေကနာမည်မရှိဘဲနံပါတ်ထွက်လာတယ်။ ဒါကငါ့ကိုဓာတ်ပုံတွေ၊ အသံသွင်းခွေတွေသွင်းခွင့်မပြုဘူး။ အကူအညီ !!!
Guillermo Bermudez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်ထိုပြproblemနာရှိနေပြီးနောက်ဆုံး ထပ်မံ၍ မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပေးသောအခြား application တစ်ခုသည် ES FILE EXPLORER အပလီကေးရှင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ES FILE ကြောင့် ES FILE ကိုတပ်ဆင်သောအခါအလိုအလျောက် activate ပြုလုပ်သော ES WIPE application ကိုယူဆောင်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ES FILE ကိုဖွင့်ရန်၊ ဘယ်ဘက်အထက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ES WIPE ကိုပိတ်ထားပြီးပြtheနာပြေလည်သွားသည်။ ငါပြproblemနာကြောင့်စိတ်ဆိုးပြီးသားဟုပြောရမည်
Guillermo Bermudez သို့ပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဖုန်းကိုနံရံပေါ်ပစ်တော့မယ်။ File manager ကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင် bq တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်သေးပါ။ သင်၏ဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသောအခြားဖန်သားပြင်များကိုကျွန်ုပ် ရရှိ၍ ကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
အခြားသူများကဖော်ထုတ်တင်ပြထားသည်မှာသန့်ရှင်းရေးဆရာသည်အနတ္တဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အတည်ပြုပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါက ... သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံများကိုပြောင်းလဲလိုသောအခါကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမျက်နှာပြင်ထပ်မှရယူပြီး၎င်းကို fecebook အတွက် activate လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းကို activate သို့မဟုတ် deactivate လားဆိုတာမသိပါ။
Es ဖိုင် Explorer နှင့် voila ဖယ်ရှားထားသောသတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Android J5 ဟုသူကပြောသည်
Android J5 သို့ပြန်သွားပါ
Pana Guillermo Bermúdezသည် ES FILE EXPLORER application တွင်မှန်ကန်သည်။ ES FILE သည် ES WIPE application ကိုသက်ဝင်စေပြီး application ၏အစိတ်အပိုင်းကိုပိတ်ထားခြင်းကြောင့်ပြproblemနာရှိသည်။
Adrian quintero ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အမှုနှင့်ဆင်တူသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် LG K10 ရှိပြီးမျက်နှာပြင်ထပ်ခြင်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုမသိပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
Adrian Quintero အားပြန်ပြောပါ
အဖြေသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြား ၀ င်ရောက်နေသော APP တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်၎င်းသည်စွမ်းအင်အကန့်အသတ်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာတွင် ၀ င် ရောက်၍ မရ၊ ဖုန်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ APP ကိုကျွန်ုပ်တို့မရပ်မနားယူပါကအမေရိကန်ကိုမစွန့်ခွာနိုင်သည့်အရာကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သော APP ကိုမရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိတ်ဆို့ထားသော APP ကိုလက်မခံနိုင်သော APP ဖြစ်သည်။
Jose luis ကိုပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက်သည် Es file explorer app ၏ ES swipe ကိုပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာအလုပ်မှမရှိခဲ့ပါ။ ငါဘာထပ်ကြိုးစားရ ဦး မှာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အမှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Samsung j7 Prime ရှိပြီးမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုမသိပါ၊ ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ငါ့ကိုမဖွင့်သောအက်ပလီကေးရှင်းအချို့ရှိပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပြသနာက Simple Control လို့ခေါ်တဲ့ Application နဲ့ကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက start (သို့) back ခလုတ်တွေကိုသုံးလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုဖျက်ပစ်တော့မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပြသနာက Simple Control လို့ခေါ်တဲ့ Application နဲ့ကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါက start (သို့) back ခလုတ်တွေကိုသုံးလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုဖျက်ပစ်တော့မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Samsung J5 ရှိပြီးသင်၏ဗွီဒီယိုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် screen overlay ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... အကယ်၍သာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ... ငါဟာဆဲလ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်အချိန်အကြာကြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာယူခဲ့ရသည်။
ငါ့ဖုန်းက LG G3 ပါ။ ကျွန်ုပ် ES File Explorer application နှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemနာ။ အဲဒါကို disable လုပ်ရင်တောင်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်သူကိုအဘို့မှတ်ချက်ထားခဲ့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ j2 ပါ။ ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်မဖျက်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
Sadhu sanga ဟုသူကပြောသည်
နည်းစနစ်များစွာကိုကြိုးစားပြီးပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်အတွက် ၂ ခုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁။ အရေးပေါ် mode သို့ဝင်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သော application ကိုဝင်ရန်အချိန်များစွာမပေးဘဲကျွန်ုပ်အတွက်ပိတ်ပင်ထားသောပရိုဂရမ်သည်အပြည့်အဝမတင်ရသေးသော်လည်းသေချာသည် ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင် application တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအနည်းဆုံး application တစ်ခုသာပြifနာရှိပါကအလုပ်လုပ်သည်။
၂။ အကောင်းဆုံးဆိုသည်မှာ application install ခလုတ်ကိုတပ်ဆင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည် https://www.youtube.com/watch?v=Yd4tTxdvhpo ငါအဖြေကိုငါဘယ်မှာ၏ဗွီဒီယိုကိုငါစွန့်ခွာပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ဖြစ်တယ်လျှင်, လျှောက်လွှာအတွက်ခလုတ်ကိုသက်ဝင်စေလျှင်။
ငါ့မှာ s5 ရှိပြီး applications အားလုံးကို uninstall လုပ်ပြီးပြီ။ overlays ၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်သတင်းစကားကငါ့ကိုကျော်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီနိုင်မလားမသိဘူး
အပြင်းအထန်တောင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီ၊ အဲဒါကငါ့ကိုပြgivingနာမပေးတော့ဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ fuck ဆိုတဲ့မာစတာအက်ပလီကေးရှင်းကပြproblemနာပါ
ကူညီကြပါ!!! ကျွန်ုပ်သည်ချိန်ညှိချက်များတွင် "အခြားအက်ပ်များအကြောင်းရေးခြင်း" ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ညာဘက်ထောင့်ရှိအစက်သုံးခုကိုကျွန်ုပ်နှိပ်သောအခါရွေးစရာနှစ်ခုသာရှိသည်။ မျက်နှာပြင် overlay ကို disable လုပ်ဖို့ဘာမျှမ
ငါသည်လည်းဤပြfromနာမှရက်သတ္တပတ်များစွာခံစားခဲ့ရသည်။ ငါခွင့်ပြုချက်ကိုသက်ဝင်စေရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရန်ထို application manager သို့သွားသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား application အချို့ကို activate လုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ငါလုပ်ခဲ့တာက ၃၆ ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာကကျွန်တော့်ကိုနေရာလွတ်ပေးတယ်။ ဒီတော့ဗွီဒီယိုရဲ့ရှင်းပြချက်နဲ့အဲဒီ cleam master applications တွေ (သို့) တခြား space liberator (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတခုခုကိုကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်ကနေဖယ်ထုတ်ဖို့မကြိုးစားဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းကိုဖယ်ထုတ်သည့်အခါပြfileနာကိုဖြေရှင်းသောအခါ ES ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူရှိပါသည်။
သန့်ရှင်းသောမာစတာကို uninstall; ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနည်းနည်းဖြီးနှင့်အတူတ။
စန်ဒရို esteban ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ငါ google အကောင့်ကို android7နဲ့ binary 8.1 ဗားရှင်းနဲ့ ၀ ယ်တဲ့ J6 Prime ကိုရယူဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက talkback ကိုအသက်သွင်းပြီး deactivate လုပ်တဲ့အခါအကူအညီနဲ့မှတ်ချက်တွေကို scroll လုပ်ပြီးပရိုဂရမ်မာရွေးချယ်စရာများသာပေါ်လာသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sandro Esteban အားပြန်ပြောပါ
Huawei စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ၂၊